नेता खोजिरहेको नेपाल, कांग्रेसमा को? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ विचार/अन्तरवार्ता ∕ नेता खोजिरहेको नेपाल, कांग्रेसमा को?
नरेश कोइराला बुधबार, २०७८ मंसीर २२ / ०९:२३
नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूका बहुप्रतिक्षित महाधिवेशन अन्तत क्षितिजमा गोचर हुन थालेका छन्। नेकपा (एमाले) को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन १०-१२ मंसिरमा चितवनमा भएको छ । कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन २४-२७ मंसिरका लागि तय गरिएको छ।
पुरानो पुस्ताको हुर्काइ त्यस बेला भयो जुन बेला नेपालको साक्षरता २० प्रतिशतभन्दा तल र बाँकी विश्वसँगको सम्पर्क अत्यन्त न्यून थियो। अझ, ‘कानूनको राज’ त दूर देशको कुरा थियो।
गत नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई कडा टक्कर दिएका माधवकुमार नेपालले छुट्टै दल खोलेपछि अहिले ओली एमालेको पर्याय बनेका छन्। ओलीसँग असहमत हुनेले कि पार्टी छाडेको कि त राजनीतिक भविष्यको खातिर ओलीसामु ‘आत्मसमर्पण’ गरेको अवस्थामा एमालेमा कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको आश नगरे हुन्छ।
उता माओवादी (केन्द्र) मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्विकल्प छन्। उनीसँग असहमत हुनेहरूले पार्टी नै परित्याग गरेको अवस्थामा दाहालको पुन: नियुक्ति निश्चितप्राय: छ।
गत तेह्रौं महाधिवेशनमा पराजित रामचन्द्र पौडेल दावेदारहरूमध्ये सबभन्दा पाका अनि सरकार र संसदका अनुभवि व्यक्ति हुन्। उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र इमानदारितामा कुनै शंका छैन। तर जनताले जुन आमूल परिवर्तनको आशा राखेका छन्, त्यस्तो ‘करिज्मेटिक’ पात्र उनी होइनन्। किनकी उनको कार्यसम्पादन र संवाद शैली पूरानो ढर्राको छ। उमेरका कारण पनि उनले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर प्रदान गरी एक सम्मानित अभिभावकको हैसियतमा रहनु श्रेयष्कर हुनेछ।